DOWNLOAD DRIVERS MAKA SCANNER BEARPAW 1200CU PLUS - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ọkwọ ụgbọala maka Mustek BearPaw 1200CU Plus nyocha
Ejiri ngwanrọ kọmputa niile rụọ ọrụ na usoro usoro, ịmepụta otu usoro. A ghaghị ịchọta nhọrọ ya dịka ịkwado nke fọdụrụ ígwè. N'isiokwu a, anyị ga-atụle isi nchịkọta nke ga-achọ n'ọdịdị corpus n'ọdịnihu, anyị ga-enyocha isi iwu nke oke nhọrọ.
Ịhọrọ usoro usoro
N'ezie, ọtụtụ ndị nwere ike ịchekwa ịchekwa n'akụkụ a nke kọmputa ahụ, ma ọ bụghị naanị na ị ga-enweta ihe na-agwụ agwụ na ihe ndị dị ala, nsogbu na ịme oyi na mkpọtụ mkpuchi nwere ike ịmalite. Ya mere, jiri nlezianya nyochaa njirimara niile nke unit tupu ịzụrụ ya. Ma ọ bụrụ na i chekwaa, mee ya nke ọma.
Nke mbụ, ọnụ ọgụgụ ahụ na-adabere na akụkụ nke motherboard. ATX bụ nke kachasị nne nne, enwere ọnụ ọgụgụ ezumike na njikọ. E nwekwara obere nha: MicroATX na Mini-ITX. Tupu ịzụta, jide n'aka na ịlele njirimara a na motherboard na ikpe ahụ. Ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke usoro usoro ahụ dabere na usoro ya.
Lee kwa: Otu esi choputa motherboard maka kọmputa
Nke a bụ ihe uto. Onye ọrụ ahụ n'onwe ya nwere ikike ịhọrọ ụdị igbe ahụ. Ndị na-emepụta ihe n'ụzọ ọ bụla na-adọrọ mmasị na nke a, na-agbakwụnye nnukwu ntanye azụ, ederede na akụkụ nkuku. Dabere na ọdịdị nke ọnụahịa ahụ nwere ike ịdị iche iche ọtụtụ ugboro. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa nzụta ahụ, ị ​​kwesịrị ịṅa ntị na nke a, ntakịrị na-adabere n'ile anya na njirimara.
Nke ahụ bụ ihe ị na-ekwesịghị ịzọpụta, ya mere na ọ dị na usoro ntụrụndụ. N'ezie, ị nwere ike ịzụta di na nwunye gị, ma ndị a bụ oge mmefu na oge ntinye. Lezie anya ịhọrọ ebe a na-etinye usoro nhazi dị mfe ma ọ dịkarịa ala otu onye na-agba ume.
Tụkwasị na nke ahụ, ṅaa ntị na ndị nchịkọta ájá. A na-eme ha dị ka okporo ma tinye ya n'ihu, n'elu na n'azụ ikpe, na-echebe ya site na oke uzuzu. A ghaghị idozi ha site n'oge ruo n'oge, ma ndị isi ahụ ga-adị ọcha maka obere oge.
N'oge mgbakọ, ị ga-emeso ụyọkọ wires, ha ga-etinyekwa ebe. Nke a na-abịa n'enyemaka nke akụkụ ikpe ziri ezi nke ikpe ahụ, ebe ọtụtụ oghere na-ejikọta dị na-eduzi njikwa USB. Ha ga-adị anya n'azụ mpaghara ohere nke unit ahụ, agaghị egbochi mgbasa ozi ikuku ma nyekwuo ọmarịcha anya.
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ọnụnọ nke ndọtị maka draịva siri ike na draịvụ siri ike. A na-emekarị ha n'ụdị obere nkata plastik, tinye ya na ohere kwesịrị ekwesị, na-ejidesi ụgbọala ahụ ike, na-agbaba ụda olu ya.
Oghere ndị ọzọ, ihe ndozi na shelves nwere ike imetụta ọkwá anyị, usoro mgbakọ na ọdịdị nke usoro agwụla. Ọbụna okwu ọnụ ala dị ugbu a nwere ụdị "ibe" dị mfe.
Atụmatụ maka ịhọrọ
Ikwesighi ịkwanye onye na-ewu ewu a maara nke ọma ozugbo, ọtụtụ mgbe a na-akwụ ụgwọ aha site na aha ahụ. Chọ maka nhọrọ ndị dị ọnụ ala, n'ezie na otu ụlọ ọrụ ọzọ ga-abụ otu ihe ahụ, ọ nwere ike ịbụ usoro nke ịdị ala.
Ejila ike ọkọnọ rụọ ọrụ. Na mpaghara usoro ihe dị otú ahụ, a na-arụzi nkeji ndị China dị ala, nke ga-emezighị ngwa ngwa ma ọ bụ belata, na-adọkpụpụta ihe ndị ọzọ.
Ọ dịkarịa ala, a ghaghị wuru onye na-ekpo ọkụ. Ezulala ngọngọ n'enweghị ndị na-akwụ ụgwọ, ma ọ bụrụ na ị nwere ego ejedebe. Ugbu a, ndị na-agbanye mgbidi adịghị eme mkpọtụ ọ bụla, ha na-arụ ezigbo ọrụ na ọrụ ha, ọ dịghịkwa mkpa ka ha na-arị elu.
Lebakwuo anya n'ihu panel. Jide n'aka na o nwere ihe njikọ niile ị chọrọ: ọtụtụ USB 2.0 na 3.0, ntinye ụda isi na ngwa ngwa igwe.
O nweghị ihe siri ike ịhọrọ usoro usoro, ọ dị mkpa ka ị jiri nlezianya mee ka nha ya dị nha ka o kwekọọ na motherboard. Maka ndị ọzọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile dị ụtọ. N'oge ahụ, e nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu site na ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na ahịa; ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya ịhọrọ nke kacha mma.